လူတိုင်း မဖြစ်မနေ ၆ လမှာ ၁ ကြိမ်လိုအပ်တဲ့ သန်ချဆေး သောက်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိကြလား? -
လူတိုင်း မဖြစ်မနေ ၆ လမှာ ၁ ကြိမ်လိုအပ်တဲ့ သန်ချဆေး သောက်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိကြလား?
အိမ်သာတက်နေရင်း သန်ကောင်ကျလာတာမျိုး ညဘက်အိပ်ခါနီး စအိုဝယားယံတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြလား?
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အပူပိုင်းဒေသဖြစ်တာမို့ သန်ကောင်‌တွေပေါပါတယ်။ လမ်းဘေးစာ‌များ၊ယင်နားစာ၊ မသန့်တဲ့ အစားအစာတွေကလည်း သန်ကောင်ပေါဖို့ ပို အထောက်အကူဖြစ်စေတာပါ။ ကျောင်းနေကလေးအရွယ်တွေမှာအဖြစ်များပြီး လူကြီးတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တာမို့ သန်ချဆေးကို ပုံမှန်သောက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သန်ကောင်အမျိုးပေါင်း အများကြီးရှိတဲ့အတွက် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေလည်းမတူပါဘူး။ အများစုဖြစ်လေ့ရှိကြတာကတော့ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ဝမ်းထဲသန်ကောင်ကျခြင်း၊ သန်ကောင်အန်ခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ စအိုဝယားယံခြင်း စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေက ကြောက်စရာကောင်းသလောက် ကုသဖို့လည်း အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ သန်ချဆေး တစ်လုံးသောက်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ တချို့က သန်ချဆေးသောက်လို့ သန်အကောင်လိုက်ကျလာမှာ ကြောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ နောက်ပိုင်း စျေးကွက်ထဲက သန်ချဆေးတော်တော်များများက သန်အကုန်‌ကြေပြီးမှ ကြတာဖြစ်လို့ စိတ်ချလက်ချသောက်လို့ရပါတယ်။ တုတ်ကောင်ကြောင့် သန်ချဆေးသောက်တာဆိုရင်တော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ သန်ဥလေးတွေသေအောင် နှစ်ပါတ်အကြာမှာ သန်ချဆေးနောက်တစ်ကြိမ်သောက်ရပါမယ်။
စားချင်တာတွေအပီစားပြီး သန်ကောင် တုတ်ကောင်ရန်ကကင်းဝေးဖို့ဆိုရင် ၆လတစ်ကြိမ် သန်ချပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ကဲ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး အခုပဲ သန်ချဆေး သောက်လိုက်တော့နော်..
#HOPE#Healthcare See less
May 18, 2022 Health, Health Tips, Healthy Lifestyle
ဒါတွေလုပ်ရင် မျက်လုံးထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား???